Choctaw WIC | JPMA, Inc.
Choctaw Nation WIC waxay aqbashay JPMA WICSmart si ay u bixiyaan Waxbarashada nafaqada ee loogu talagalay ka qaybgalayaasha WIC. Casharradu waxay diyaar u yihiin ka qaybqaateyaasha kiimikada ku salaysan kiniiniga ee rugta caafimaadka iyo sidoo kale khadka internetka oo laga helo meel kasta oo leh internet.
Barnaamijka "Choctaw Nation WIC WIC" waa barnaamijka quudinta dheeriga ah ee loogu talagalay haweenka, dhallaanka iyo carruurta. Si aad ugu qalanto barnaamijkaan, shakhsiga waa inuu buuxiyaa shuruudaha soo socda:
Uur yeelo, qaybta ka dib, ama naas-nuujinta iyo halista nafaqada.
Dhalasho ilaa hal sano ah oo aad ku jirto khatar nafaqo leh.
Da'da hal illaa shan sano jirka ahna halis nafaqo leh.
Ka soo-baxa tilmaamaha u-qalmitaanka dakhliga.
Barnaamijka WIC waa barnaamij nafaqo leh oo bixiya cuntooyinka ay ku badan yihiin gudaha, borotiinka, kalsiyum, fitamiin A iyo fiitamiin C. Barnaamijka ayaa federaalku maalgeliyaa iyada oo loo marayo USDA waxayna u adeegtaa 10 1 / 2 gobollada Choctaw Nation. Meelaha rugta caafimaadka ee WIC waxay ku yaalaan Hugo, Durant, Boswell, Antlers, Atoka, Idabel, Broken Bow, Talihina, Poteau, Wilburton, Stigler, Coalgate, McAlester, Bethel, Smithville iyo Spiro.
Barnaamijka Haweenka, Barnaamijka Carruurta iyo Carruurta (WIC)
Claudene Williams Telefoon: 800-522-6170